Idempiere, OSGI နည်းပညာဖြင့် Open Source Erp | Linux မှ
Idempiere, OSGI နည်းပညာဖြင့် Open Source Erp
Luigys toro | | applications များ, GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်
ဆော့ဝဲ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာပြီးယခင်အချိန်ကစီးပွားဖြစ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနယ်ပယ်အားလုံးလွှမ်းမိုးသည့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲအားအခြားနည်းလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်း၊ ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ခဲ့၌တည်ရှိ၏ စီးပွားရေးAreaရိယာ နေ့တိုင်းအခမဲ့ application များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်။ ကဗျာ ဤအပလီကေးရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာမှကျေးဇူးတင်ခြင်းကဲ့သို့သောအလွန်အရေးကြီးသောနယ်ပယ်ကိုအားဖြည့်ရန်လာသည် အရင်းအမြစ်စီမံခြင်း၊ ထိရောက်သောနှင့်အရွယ်မှာလမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ပေါင်းစည်းမှုခွင့်ပြု။
Idempiere ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူး စနစ်များ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ (အင်္ဂလိပ် ERP စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းထို့အပြင်၎င်း၏အဓိကတစ် ဦး မှာရှိပါတယ်ရာ ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာ (အင်္ဂလိပ် CRM ဖောက်သည်များဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု) တစ် ဦး ဖြင့်လိုက်ပါသွား ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် Manager ကို (အင်္ဂလိပ် SCM ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှု) ။ Idempiere သည် Open Source ERP ကိုအခြေခံသည် ကန္တာရ နည်းပညာ၏ပါဝင်အတွက်ဒီကနေကွဲပြား OSGI ၎င်းသည်ပလပ်ဂင်များဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအပြည့်အဝ ERP ဖြစ်စေသည် အရွယ်မှာ modular နှင့်လွတ်လပ်သော။
စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်စီမံမှုစနစ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုစျေးကွက်၏အသုံးပြုမှုဖြင့် ဦး ဆောင်သည် ဆော့ဖျဝဲ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသောလိုင်စင်များနှင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့ရန်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သော် Idempiere သည်အလွန်ကြီးမားသောချဲ့ထွင်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည် ပရိုဂရမ်းမင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်စံနှုန်းများကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်သည် ဂျာဗားပလက်ဖောင်း, စီးပွားရေး Edition ကို ဖြစ်ခြင်းအပြင် (J2EE, ကိုလည်း Enterprise Java အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော) iဒေတာဘေ့စအပေါ် ndependent နှင့်အမျိုးမျိုးသော databases ကိုချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းပျော်မွေ့။ အလားတူပင်ကတစ်တင်ဆက်ထားပါတယ် စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်တက်ကြွဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒါကထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေနဲ့ရင့်ကျက်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းပဲ ဆော့ဖျဝဲ.
Idempiere ကကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် -
အဖွဲ့အစည်းများစွာ (ဌာနချုပ်၊ ကုမ္ပဏီများ)
အဘယ်အရာကို Idempiere အထူးစေသည်၎င်း၏ဖြစ်ပါတယ် အလိုက်သင့်နေထိုင်နိုင်ခြင်း တစ်ယောက်ယောက်ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းအမှားများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်များကိုကိရိယာတစ်ခုတည်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Idempiere သည်အဓိကကျသည့် function areaရိယာအတွက်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ to အပြင် parameterization နှင့် configuration အတွက်အခန်းကဏ္ has ရှိသည် ၎င်းကိုကြီးမားသောအုပ်စု (၁၂) ခုအဖြစ်ခွဲထားသည်: စနစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လျှောက်လွှာအဘိဓာန်၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်ဆံမှု၊ အရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ ပြန်လာခြင်း၊ ထူးချွန်သောချိန်ခွင်များ၊ ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း။
ဖွဲ့စည်းပုံအရဇာတိ Idempiere သည်စာရင်းအင်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသောကဏ္ six ခြောက်ခုအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။
အလားတူစွာ Idempiere ကိုတိုးချဲ့နိုင်ပြီး၎င်းကိုသုံးသော plugins များကြောင့်ဖြစ်သည် OSGI နည်းပညာ, လက်ရှိရှိပါတယ် တရားဝင် repositories အတွက်ပလပ်အင် 52 Idempiere ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးချဲ့ပေးသည်၊
Asterisk၊ Google မြေပုံ၊ အခြားသူများအကြား JasperReport ကဲ့သို့သောအခြားပလက်ဖောင်းများနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း
Native Android တွင်ပြုလုပ်သောမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများနှင့် application များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်း။
အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများရှိတည်နေရာများ (သူတို့သည် Erp အားနိုင်ငံတစ်ခုစီ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်)
အရောင်းAreaရိယာများအတွက် POS ဖောက်သည်။
စကင်နာ, ကိရိယာများ, အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူပေါင်းစည်းမှု။
interface ကိုတိုးတက်အောင်သို့မဟုတ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်များစွာသော themes များ။
တရားဝင်ပလပ်ဂင်များစွာလည်းရှိသည် core ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ဖို့ခွင့်ပြုပါ ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ csv တင်သွင်းမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အခြားသူများအတွက်ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းစသည့် Idempiere ၏။ ထို့အပြင်အသိုင်းအဝိုင်းသည်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖြန့်ဝေနေသောပလပ်ဂင်များကိုပြုလုပ်သည်။ Erp ရော plugins နှစ်ခုလုံးကို GPLv2 လိုင်စင်အောက်တွင်ဖြန့်ဝေထားသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကို ၄ င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။
Idempiere ကိုဖောက်သည်နှစ် ဦး အောက်တွင်ဖြန့်ဝေသည်။
Desktop Version အရာအောက်မှာလုပ်ဖြစ်ပါတယ် Swing Java ဂရပ်ဖစ်စာကြည့်တိုက်၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်သုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီးအသုံးပြုခွင့်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပါးသောကုမ္ပဏီများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဝက်ဘ်ဆာဗာသည်လိုချင်သောအသုံးပြုသူများ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းကိုမခံနိုင်သည့်အမှုများတွင်လည်းအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ desktop client သည်အရာဝတ္ထုများကို pc / client level မှာ load လုပ်တယ်။ Swing ဗားရှင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုသူများကိုဖြန့်ဝေသည်မှာတပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်သည်။
Idempiere ရှိပါတယ် တစ် ဦး အရှိန်နှင့်စနစ်တကျလမ်းအတွက်စိုက်ပျိုး သံသယမရှိပါ Osgi နည်းပညာ ကြောင်းကဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ် အပြည့်အဝ modular ERP, သော module တွေ၏ကျန်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲအခြားနှင့်အတူတ ဦး တည်း ERP module တစ်ခုအစားထိုးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။ ၎င်းသည်သူတို့ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအသင်းများပေါ်တွင် developer များနှင့်အတူစီမံကိန်းများ၏ရိုးရှင်း။
ဒေသခံနှင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားနှစ် ဦး စလုံး၏စီမံခန့်ခွဲမှု။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ အခမဲ့ Idempiere ကြိုးစားပါ နှင့်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာရပ်ရွာသရုပ်ပြကိုဝင်ရောက် https://test.idempiere.org/ အောက်ပါ access ကိုဒေတာနှင့်အတူ။
အီးမေးလ်: gardenworld.com @ admin ရဲ့(ထိုနေရာများပါဝင်သည်!) Password ကို: Aရာဝတီ
အီးမေးလ်: superuser@idempiere.comOR idempiere.com @ system ကို (နေရာများပါဝင်သည်) Password ကို: စံနစ်
developer များကရနိုင်သည် အရင်းအမြစ်ကုဒ် အပေါ် Idempiere ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် SourceForge၊ Idempiere တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သင်ကြားခြင်းအတွက်လက်စွဲစာအုပ်များ၊ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ၊ ကိရိယာများနှင့်ကုဒ်အပိုင်းအစများအများအပြားရှိသည်။ Idempiere တရားဝင်ဝီကီ.
Idempiere ၏အနာဂတ်သည်အလွန်အားရှိစရာဖြစ်သည်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်း၏ကြီးထွားမှုသည်အတော်အတန်ကြီးမားသည်။ အခြားကိရိယာများနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြသနာအားလုံးနီးပါးကိုဖြေရှင်းနိုင်စေသည်။ Osgi ၏ပလက်ဖောင်းတွင်အဓိကပါဝင်မှုသည်ကြီးမားသောစီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့သောကုမ္ပဏီကြီးများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ယခင်အပေါငျးတို့သအောင်မြင်မှုများအထက် ပွဲ y ကန္တာရ သငျသညျ၏ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိခြင်း၏ယုံကြည်မှုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါ အချက်အလက်ပမာဏများစွာကိုစီမံနိုင်စွမ်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သည့် ERP တစ်ခု။ Idempiere သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ဆော့ဝဲ၏ကတိ အသေးစား၊ အလတ်စားနှင့်အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထူးကဲကောင်းမွန်သောကိရိယာများအတွက်တံခါးဖွင့်ပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Idempiere, OSGI နည်းပညာဖြင့် Open Source Erp
client ကွန်ပျူတာများအတွက်ပြcanနာများကြောင့် java ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပြaနာတစ်ခုမဟုတ်ပါလား။ ကွန်ပြူတာ၊ တက်ဘလက်၊ လက်ကိုင်အစရှိသည့်အပိုဆော့ဖ်ဝဲများမလိုအပ်ဘဲမည်သည့် browser ကိုမဆိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့် server-side language ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်သည်။ အဆုံးအသုံးပြုသူ၏။
Haider လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
သုံးစွဲသူဘက်မှအဖော်သင်ဘာမှမလိုပါ၊ မည်သည့်ဘရောင်ဇာမှသင့်အတွက် java plugin မပါပဲသင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ java ကိုအသုံးပြုသောတစ်ခုတည်းသောဆာဗာသည်
iDempiere ကိုကိုင်ထားပါ။ 😛
CANAIMA GNU / LINUX - သင်၏အိမ်စာလုပ်ရန်အတွက်လား။
Jenkins CI, လုပ်ငန်းအလိုအလျောက်များအတွက် tool တစ်ခု